ကိုပေါက် ကြာသပတေးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၄၇ မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။၁၉၈၈လူထုအုံကြွမှုအတွင်းအစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူ၂၄ဦးအားကိုယ်တိုင်ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး ၁ဝဝကျော်သတ်ဖြတ်ရာ၌ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုဦးထူးထူးဟန်၏ဝန်ခံဖြောင့်ချက်များကိုကိုးကား၍ သြစတြေးလျနိုင်ငံAAPသတင်းဌာနတွင်ဇူလိုင်လ၁၈ ရက်နေ့ကတည်းက စတင်ဖော်ပြပါရှိခဲ့ပြီး ten NEWS, SBS ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းများတွင်လည်း ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ကြသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံးICCသို့တက်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကို မြန်မာစစ်ရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည့်အတွက်အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအကြားသံသယဖြစ်သူများရှိနေကြသလိုမြန်မာအစိုးရကိုသာအကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမှာလား ဆိုသော မေးခွန်းများ ထုတ်လာကြသည်။
ထို့ကြောင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်၁၅နှစ်ကြာနေထိုင်လာခဲ့သည့် ဦးထူးထူးဟန်အား၎င်း၏ဖြတ်သန်းမှုနှင့် ဤသို့လုပ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်း၊ရည်ရွယ်ချက်များသိရှိနိုင်ရန်မဇ္ဈိမသတင်းထောက်ကိုပေါက်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။
AustralianAssociatedPress–AAPသတင်းရေးသားချက်အရကိုထူးထူးဟန်က၈၈အရေးအခင်း ကာလတုန်းကဆန္ဒပြသူတွေကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်၊၂၄ယောက်ကို ကိုယ်တိုင်သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
‘‘ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။၂၄ယောက်မကဘူးထင်တယ်၊၂၄ယောက်ကျော်တယ်။မှတ်မိတဲ့လူပေါ့။ကျနော်နာမည် သိတဲ့လူ၊မြို့နယ်သိတဲ့လူ။တကယ်တမ်းသတ်ခဲ့တာတော့၂၄ယောက်ထက်မကဘူးပေါ့နော်။သာကေတ ဟိုဘက် တံတားထိပ်၊ဒီဘက်တံတားထိပ်မှာကျနော်တို့တပ်မ၇၇နှစ်ခုရှိတယ်။ ဒီဘက်မှာကျနော်တို့က MI-6 လျှို့ဝှက်ရုံးထားထားတာလေ။အဲဒီမှာကျနော်ကိုယ်တိုင်ပစ်သတ်တယ်။ပစ်သတ်ပြီးတော့ ကျနော့်ရဲဘော်တွေကပဲအလောင်းတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ငမိုးရိပ်ချောင်းထဲပစ်ချတယ်။ အလောင်းဖျောက်တာပေါ့ဗျာ”
‘‘ကျနော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။AAPမှာပေးထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေကော်ပီးယူလိုက်လို့ရပါတယ်။ ကျနော်သတ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ မြို့နယ်တွေ၊ နာမည်တွေနဲ့ အသက်ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာတွေလည်း ပါတယ်။ နာမည်တွေကတော့ဗမာလိုပဲကျနော်ရေးပေးထားပါတယ်။ခင်ဗျားပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့။ သာကေတတို့ ဘာတို့၊ ကြို့ပင်ကောက်တို့ အကုန်ပါတယ်’’
‘‘လူငယ်တွေပေါ့ဗျာ၊ကျောင်းသားတွေပေါ့။ပြီးတော့နောက်ကနေမာစတာမိုင်းလုပ်တဲ့ သူတွေပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ဘက်ကနေဝင်လာပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုမြှောက်ပေးတဲ့လူတွေလည်း ပါတယ်။အစုံပေါ့ဗျာနော်။ကျနော်ပြောတာ၂ဝကျော်ထဲမဟုတ်ဘူးဗျ။၁ဝဝကျော်တယ်ဗျ။ကျနော် အမိန့်ပေးပြီးလို့ကျနော့်အမိန့်နဲ့သေသွားရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲ။ကျနော်ကယ်လိုက်တဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်ပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကကျနော့်ရပ်ကွက်ထဲက သူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့စာရင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်နဲ့လမ်းအတူတူ၊ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေရဲ့သားသမီးတွေ၊သူတို့မိဘတွေကိုကျနော်သိတော့တချို့လူတွေကျတော့ လွှတ်ပေးတယ်လေ။တချို့ကျတော့ကျနော်သတ်ပစ်တယ်။ တချို့ကိုကျတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် မသတ်ဘူး။ ကျနော် အမိန့် ပေးလိုက်တာပေါ့။ ကျနော်က ကျောင်းသားတွေ ထဲမှာလည်း ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာကိုး။ ကိုမိုးသီးတို့နဲ့ အတူတူလုပ်နေတာကိုး။ ၈၈ တုန်းကMI-6ကနေကျနော်ကတာဝန်ယူတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီကနေတဆင့် ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေကနေ သတင်းတွေကို ကျနော်က MI-6 ကို ပေးတယ်ပေါ့နော်’’
‘‘9mmနဲ့ပေါ့။အဲဒီခေတ်ကအရာရှိတွေကိုပေးထားတာကတော့9mm၂ခုရှိတယ်။အတိုရှိတယ်၊အရှည် ရှိတယ်။၉မမအတိုပေါ့။အဲဒီဟာနဲ့ပဲကျနော်ကပစ်သတ်တာ။ သူတို့ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတော့ နောက်ကနေ ပစ်တာ၊သေမှန်းတောင်မသိဘူး။နောက်ကနေ ပစ်တာဆိုတော့နာကျင်မှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။သူတို့ခေါင်းကို သေနတ်နဲ့လည်း မထောက်ဘူး။ အဝေးကနေ ပစ်တာ။ အဲဒီနေရာမှာ ပွဲချင်းပြီးပါပဲ”
အဝေးကနေ ပစ်တယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုလဲ။
‘‘သူတို့နောက်ကနေပစ်တာလေ။သူတို့ခေါင်းကိုသေနတ်ကြီးနဲ့ထိလိုက်တေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ခံစား ရမယ်။တပေအကွာလောက်ကနေပစ်တာပေါ့။ ၆ လက်မအကွာ၊တပေအကွာလောက်ကနေပစ်တာပေါ့။ သူတို့ကို မခံစားရအောင်ပေါ့နော်’’
‘‘ကျနော့်ကိုအမိန့်ပေးတာကတော့..အင်း..ဒါကကျနော့်အကြောင်းကိုပြောပြတာလေ။အခုကျနော်တို့ ဘက်မှာလည်းကျနော်အပါအဝင်၉ဦး ရှိတယ်။ကျနော်တို့MI6က လူတွေ ဒုက္ခသည်အနေနဲ့ ရောက်လာတာ။ အဲလိုမျိုးဆိုတော့ကျနော်ကသူများတွေကိစ္စမပြောချင်တော့ဘူး။ကျနော့်အရာရှိတွေ၊ကျနော့် တပည့်တွေအကြောင်းမပြောချင်တော့ဘူး။ကျနော့်အကြောင်းပဲ ပြောချင်တယ်။ အမိန့်ဆိုတာက အထက်က လာတာပဲ။အဲဒီအချိန်ကကျနော်အလုပ်နှစ်ခုလုပ်နေရတဲ့အတွက်အရမ်းပင်ပန်းတယ်။တနေ့ကို၎ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရတယ်၊၃နာရီလောက်ပဲအိပ်ရတယ်။ဦးနှောက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် မရဘူး။အဲဒီအချိန်မှာအရမ်းရှုတ်ထွေးနေတဲ့အချိန်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာလည်း ကျနော်က အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး’’
‘‘အဲဒီတုန်းကကျနော်က၉တန်းနှစ်ဆိုတော့ အခြေခံ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ရဲတေဇတို့ ဘာတို့နဲ့ အတူတူပေါ့”
၉ တန်းဆိုတော့ ဘယ်အထကလဲ ခင်ဗျာ့။
‘‘ကျနော်က၉တန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။၉တန်းကျောင်းသားအနေနဲ့ ဒီကျောင်းသားထုထဲကို ဝင်လာတာပေါ့။ ၈၈ မှာ။ ကျနော်ကိုယ်ကျနော် ၉ တန်းကျောင်းသားပါ ဆိုပြီးတော့’’
တောင်ဥက္ကလာပ၉တန်းကျောင်းသားအနေနဲ့ဆိုတော့ တောင်ဥက္ကလာပ ကျောင်းသားလေးတွေက ဘယ်လိုလုပ် ယုံကြည်နိုင်မလဲ။
‘‘တောင်ဥက္ကလာပဆိုတာကဒီလိုဗျာ့။ကျနော်ကအသက်လိမ်ထားတော့ကျနော်၁၈နှစ်ပေါ့။DSAမှာ ခုနှစ်တောင်မမှတ်မိတော့ဘူး။ကျနော်က၆၇မှာမွေးတာ၁၈နှစ်ဆိုတော့ခင်ဗျားဟာခင်ဗျား ပေါင်းကြည့်တော့။ ကျနော်က သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကြာခဲ့ပြီ။ နှစ် ၂ဝ ကျော်ခဲ့ပြီ’’
‘‘ကျနော့်ဆီမှာတယောက်ရှိတယ်။Queenslandမှာ၊နောက်Westernမှာ တယောက်ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မဲလ်ဘုန်းမှာ၎ယောက်ရှိတယ်။ဆစ်ဒနီမှာ၂ယောက်ရှိတယ်။ကျနော်အပါအဝင်၉ယောက်ပေါ့နော်။ ဒီမှာရှိတယ်။ကျနော်တို့အားလုံးကကျောင်းသားဘက်ကနေလာတာတွေ။တချို့ကျတော့လည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီး သတင်းစာကျနော်တောင်မေ့နေပြီး..အဲဒီသတင်းစာမှာ လုပ်လာခဲ့တာ။လူကြီးပိုင်းတွေမှာ ကျနော့်ရဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတယောက် ပါတယ်။ ကျနော် နာမည် မသုံးချင်တော့ဘူး’’
‘‘၂နှစ်။ကျနော်တို့က၈လရယ်၊နောက်၆လကျတော့MIကိုရောက်တော့၆လ သင်တန်း ထပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ အားလုံးပေါင်း ၃နှစ်ကျော်ပေါ့နော်။ကျနော် MI6ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ ၈၇ နှစ်ကုန် ဖြစ်နေပြီ။ ၈၈ အစမှာ
ကျနော်ကMIမှာအရာရှိပေါက် ဖြစ်သွားပြီလေ။ ၈၈ဖြစ်တော့ ကျနော်က အရာရှိအနေနဲ့ တာဝန်ယူရပြီ ၂ ပွင့်ဖြစ်သွားပြီင်္။ အဲဒီတော့ ၈၈ မှာ ရဲက အားနည်းတော့MI6တို့၊ MI5တို့၊ MI9တို့၊ MI7တို့ကို သုံးတယ်လေ။ ၄ ခုရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာသုံးတာ။ နယ်တွေမှာကျတော့ MI11တို့ဘာတို့ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ရန်ကုန်မှာ သုံးတာက MI 5,6 မနော်ဟရီ၊ ရေကြည်အိုင်ကျတော့ MI 7,9 တို့ ဖြစ်ကုန်ပြီ’’
‘‘အဲဒါကျတော့ကျနော်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျနော့်မှာဒီမှာရဲဘော်တွေတချို့မိဘ တွေကဗမာပြည်မှာရှိနေတယ်။သင်တန်းကနံပတ်စဉ်တွေပြောချလိုက်ရင်အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူးနော်။ စိတ်တော့မရှိပါနဲ့’’
‘‘ကျနော်ကတောက်လျှောက်လုပ်လာခဲ့တာ။ထိုင်းမှာလည်းရောက်တော့လည်းတော်တော်များများကျနော့်ကို သိပါတယ်။ထိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျနော်ကအထွေထွေအတွင်းအရေးမှူးလုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာစပြီးကျနော်နဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့စပြီးပြဿနာတက်တယ်။တက်တယ်ဆိုတာကကျနော့်ကိုဘတ်ဂျက်ဖြတ်တယ်။ ထိုင်းရောက်ခါစကကျနော်ကကော်ဆန်းတို့ဘာတို့မှာဘိလပ်မြေတွေသယ်ပြီးတော့အလုပ်တွေ ဝင်လုပ်ရတယ်။ MI6တယောက်အနေနဲ့ဘတ်ဂျက်မပေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းရေးက ဘာညာ၊ သံအမတ်တွေတောင် လခမရဘူး ဘာညာပေါ့။ ကျနော် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်ကျတော့ ကျနော့်ကို ဒေါ်လာ၂၀၀၀၀ထည့်ပေးတယ်။ ထည့်ပေးပြီးတော့ ကျနော့်ကို အလုပ်ခိုင်းဖို့ လုပ်တယ်။ ကျနော်က အဲဒီ ၂၀၀၀၀ စလုံးကို တပတ်အတွင်းမှာသုံးပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ သူတို့က “ဘယ်မှာလဲ”ဆိုတော့ “ငါ ..ပတ်ပုန်းမှာ ချနေတယ်”လို့ ပြောလိုက်တယ်ဗျာ ပြီးရော။ အဲဒီလိုမျိုး ပြဿနာလေးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျနော့်ကို သုံးလို့ မရတော့မှန်း သိလာတယ်။ မရမှန်းသိလာတော့ ကျနော့်ကို ခြိမ်းခြောက်တယ်။ “122 နဲ့ မင်းကို ဆွဲတော့မယ်၊ နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုနဲ့ မင်းကို ဆွဲမယ်၊ မင်းကို သေဒဏ်ချနိုင်တယ်” အဲလိုမျိုး ခြိမ်းခြောက်လာတော့ ကျနော်က **** ** လို့ ပြောပြလိုက်တယ်။”
‘‘ကျနော်ကထောင်လည်း ကျခဲ့ဖူးတာကိုး။ ထောင်ထဲမှာကတည်းက ကျနော်က တဖြည်းဖြည်း စိတ်ဓာတ်က
ပြောင်းလာပြီ။တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ကရင်ဆိုင်ပြီးတော့ သွားခဲ့တော့အရေးအခင်းတခုထဲတင်မဟုတ်ဘူး။တချို့ကျောင်းသားတွေကျတော့တကယ့်ကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကြတာ။အဲဒီလိုတွေမြင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ချင်းစာလာတယ်။ထောင်ထဲမှာ၃ နှစ်ကျော်နေခဲ့တော့ထောင်ထဲမှာလည်းကျနော်ကနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေလေ့လာခဲ့တယ်လေ’’ ထောင်ထဲမှာကတည်းက စိတ်ကပြောင်းလာတဲ့ သဘောပေါ့။”
‘‘ပြောင်းလာတယ်ဗျာ။မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ထောင်ကထွက်လာပြီးတော့ကျနော်တောင်းဆိုတယ်။ကျနော့်ကို ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျနော်ကထောင်ထဲမှာအရိုက်ခံရတာကိုး။ကျနော်MI6မှာ လုပ်နေတာကိုထောင်ကအရာရှိတွေကိုပေးမသိဘူး။ပေးမသိတော့ ကျနော့်ကို ကျောင်းသားပဲ ထင်တာပေါ့။
ကျောင်းသားဆန္ဒပြတဲ့အထဲကျနော်လည်းပါတော့ပိတ်ရိုက်ခံရတာပေါ့။ ကျနော့်ကိုVIPသဘောမျိုး မထားထားဘူး။ ထောင်ကထွက်လာတော့ ကျနော်က အရမ်းနစ်နာတော့ နစ်နာကြေး တောင်းလို့ ရတာပေါ့ဗျာ။ ထွက်လို့တောင် မရဘူး’’
ဒီလိုဖော်ထုတ်လိုက်တော့ခိုင်လုံတဲ့၊ခိုင်မာတဲ့သက်သေခံအထောက်အထား အနေနဲ့ရော ဘာတွေရှိထားလဲ။
‘‘ကျနော့်မှာ ဒီမှာ ၉ ယောက် ရှိတယ်။ သူတို့က လောလောဆယ်တော့ နာမည်မပြောပါနဲ့တဲ့’’
‘‘ကျနော့်ဆီမှာတယောက်ရှိတယ်။Queenslandမှာ၊နောက်Westernမှာ တယောက်ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မဲလ်ဘုန်းမှာ၎ယောက် ရှိတယ်။ဆစ်ဒနီမှာ၂ယောက်ရှိတယ်။ကျနော်အပါအဝင်၉ယောက်ပေါ့နော်။ ဒီမှာရှိတယ်။ကျနော်တို့အားလုံးက ကျောင်းသားဘက်ကနေ လာတာတွေ။ တချို့ကျတော့လည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးသတင်းစာကျနော်တောင်မေ့နေပြီး..အဲဒီသတင်းစာမှာ လုပ်လာခဲ့တာ။ လူကြီးပိုင်းတွေမှာ ကျနော့်ရဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတယောက် ပါတယ်။ ကျနော် နာမည် မသုံးချင်တော့ဘူး’’
‘‘မပါဘူးခင်ဗျာ့။ကျနော်အကြီးဆုံးပဲ။သူတို့ကိုကျနော်မေးကြည့်တယ်။ကျနော်သွားမယ်၊သတင်းထောက် တွေနဲ့ စကားပြောတော့မယ် ဆိုပြီးတော့’’
‘‘မတူဘူး၊မတူဘူး။သူတို့ကစီးပွားရေးအရ အရမ်းအောင်မြင်နေကြပြီ၊ အိမ်တွေ၊ ကားတွေနဲ့။ အခု ၂ ယောက် ဖုန်းဆက်လာတယ်။ဒီနေ့မှဖုန်းဆက်လာတယ်။သူတို့က ကျနော်နဲ့ တွဲလုပ်ချင်တယ်ပေါ့။ တယောက်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး စွဲနေပြီး၊စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ပေါ့။သူလည်းလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ ဒီမတရား လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ၊ ကျနော့်လိုပေါ့။ စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်တယ်ပေါ့’’
‘‘ဥပဒေတွေဘာတွေ ကျနော် နားမလည်ဘူးလေ။ ကျနော်က မစဉ်းစားဘူး။ ကျနော့်မှာလည်း ဒီမှာ မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့။ ကလေး ၃ ယောက် ရနေပြီလေ။ ဒီမှာ ရတာ။ မိန်းမကိုလည်း ဒီမှာတွေ့တာ။ လာတုန်းကတော့ တယောက်ထဲလာတာ။ကျနော့်မှာကလေးငယ်ငယ်ရှိတယ်။နောက်တခုပြန်စဉ်းစားတာက ကျနော်တယောက်ထဲ ကျနော့်မိန်းမနဲ့ အခု စကားမပြောဘာမပြောစိတ်ဆိုးတာပေါ့။ ကျနော့်မိန်းမကိုလည်း ကျနော် ဒီအတွင်းရေးကို မပြောပြခင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ ကျနော်က ပြောပြခဲ့တာ’
‘‘အခု ဘာအရေးယူမှုမှ မရှိသေးဘူးခင်ဗျာ့။ သူတို့ စောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့’’
‘‘ကျနော့်ဖုန်းလိုင်းတွေဘာတွေကို အကုန်လုံး သူတို့ နားထောင်နေတယ်။ အဲဒီလောက်ကိုတော့ သိတာပေါ့။ ကျနော်လည်းထောက်လှမ်းရေးကလာတာပဲ။ သူတို့ မပိုင်သေးတော့ ကျနော့်ကို ဖမ်းလို့ မရသေးဘူးဆိုတာ။ ကျနော်ဝန်ခံထားတာပဲ။ဝန်ခံထားပေမယ့်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေက မတူဘူးဗျ။ ဝန်ခံတိုင်းလည်း အရေးယူလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က ထင်ချင်ထင်မယ်။ လိမ်ပြောတာလား။ ကျနော်က အရင်က နာမည်ကြီးတာကိုး”
‘‘ဒီသြစတြေးလျမှာ။ကမ်ပိန်းတွေ၊စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကကျနော့်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာ။၂ဝဝ၃မှာ တနိုင်ငံလုံးကို ခြေကျင်းကြီး ခတ်ပြီးတော့ တနိုင်ငံလုံးကို လျှောက်ခဲ့တာ၊ လူပေါင်း တသိန်းကျော်။ အဲဒါကို Documentaryတောင်ရိုက်ထားတယ်။ အဲဒီတော့မှ နောက်မှ အမေရိကတို့ ဘာတို့ စပြီး အော်တာ။ ထိုင်းတို့
အော်တယ်။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။KevinRuddရောအကုန်လုံးက စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ မယုံကြဘူးပေါ့’’
“သုံးရက်တော့ကြာပြီ အခု ရဲက မဖမ်းသေးဘူးဆိုတော့ တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ အခုမှ ဇာတ်လမ်းက စတာနော်။ ကျနော့်မှာလည်း အကြံတခု ရှိတယ်ဗျ။ ခင်ဗျားတို့ နောက်မှ ပြောလို့ရမယ်။ ဇာတ်လမ်းက အခုမှစတာ။ မီဒီယာရဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ့။ မီဒီယာဆိုတာကလဲ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် အလုပ်လုပ်ကြတာ။ ခင်ဗျားက ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်ပြရင် မီဒီယာက ခင်ဗျားဆီ ရောက်လာမှာပဲ”
ပေါ့နော်။ ကျနော်နဲ့ သူနဲ့ တွေ့တဲ့ ပုံတွေကိုပါ ထည့်ရိုက်ထားတယ်။ ဒုဝန်ကြီးချုပ်က ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့
ကျနော့်ကို ICCပို့ဖို့အတွက်လုပ်တယ်။ဥပဒေကမရှိပြန်ဘူး။ ကျနော်က ဒီ ၂ဝဝ၂ နောက်ပိုင်း ကျူးလွန်ခဲ့တာ
ဖြစ်တဲ့အတွက်၂ဝဝ၂ မှာဥပဒေသစ် လုပ်ထားတယ်။ကျနော်က၈၈နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အကျုံး မဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်ကလူတွေကိုသတ်ခဲ့ပေမယ့် ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးသတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ သေသွားအောင် မခံစားရအောင် သတ်ခဲ့တာဆိုတော့ပေါ့။ ကျနော့်ကိုICCပဲ ပို့ပို့၊ ဘယ်ပဲပို့ပို့၊သေဒဏ်ဘဲပေးပေး၊ဗမာပြည်ပဲပြန်ပို့ပို့ကျနော့်အနေနဲ့ကရယ်ဒီဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ခံရမှာဆိုတာ သိတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပြီးသွားပြီ။
“အား….ကျနော့်မိဘရယ်၊ကျနော့်မိန်းမရယ်တဦးတည်းမျက်ရည်ကျနေတာမဟုတ်ဘူး။ဗမာပြည်မှာ ရှိတဲ့မြောက်များစွာသောမိဘတွေ မျက်ရည်ကျနေတာ။ သားသမီးတွေ ပျောက်ဆုံးတယ်။ ထောင်တွေထဲမှာ ရှိသလိုလို၊နယ်စပ်တွေမှာ ရှိသလိုလို။ အဲဒီတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ ကျနော်သတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဒါတွေဟာ အိမ်ပြန်မရောက်လာနိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်။ ဘီင်္ဘီစီကနေ လွှင့်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တောင်းပန်တယ်။ကျနော့်မှာအပြစ်ရှိတယ်။လူတွေကိုလည်းလွှတ်ပေးနိုင်ရဲ့သားနဲ့ကျနော် မလွှတ်ပေးခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အရမ်းငယ်တယ်။ အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ အလုပ်နှစ်ခုကို လုပ်နေရချိန်ဆိုတော့”
“အကသမှာလည်းကိုမိုးသီးဇွန်တို့နဲ့အတူလုပ်နေတာလေ။ကိုမိုးသီးဆိုရင်ကျနော့်ကိုကောင်းကောင်းသိ ပါတယ်။ကျနော့်ကိုမသိတဲ့လူမရှိဘူးနော်အရေးအခင်းမှာ။အိုးဝေအောင်တို့၊ရဲတေဇတို့ဘာတို့ အခုအမေရိကမှာ ရှိပါတယ် ဒီကောင်တွေ။ ကျနော်နဲ့ အတူလုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေ”
အခုလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်မျှော်မှန်းထားသလို ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောနိုင်မလားခင်ဗျာ့။ အခုဆိုရင် သုံးရက် ကြာပြီဆိုတော့။
“သုံးရက်တော့ကြာပြီအခုရဲကမဖမ်းသေးဘူးဆိုတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအခုမှဇာတ်လမ်းက စတာနော်။ ကျနော့်မှာလည်း အကြံတခု ရှိတယ်ဗျ။ ခင်ဗျားတို့ နောက်မှ ပြောလို့ရမယ်။ ဇာတ်လမ်းက အခုမှစတာ။ Just begin. Not finished yet. People think this is going to be finished, you know. ကျနော် ထောင်ထဲ ရောက်သွားတာနဲ့ ကျနော့်ကို အပြစ်ပေးလိုက်တာနဲ့ မပြီးဘူးဗျ။ ဇာတ်လမ်းက အခုမှစတာ ကျနော် အဲတာကို ပြောလို့မရဘူး။ ကျနော်လုပ်ရတာလည်း အကြောင်းတော့ရှိတယ်ဗျာ။ အဲဒီအကြောင်းကို ပြောပြပိုင်ခွင့်မရှိဘူး”
“ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်က ICC ကို ရောက်ချင်တယ်။ ICC နဲ့ တန်းတူ စကားပြောချင်တယ်။ ဒါ ကျနော့် ရည်ရွယ်ချက်”
“ အဲဒီအချိန်ကျမှ ကြည့်ဗျာ။ အဲဒီအချိန်ကျရင် ကမ္ဘာ့မီဒီယာကို ကျနော် ရထားပြီ။ ကမ္ဘာတခုလုံးက မီဒီယာ
ရောက်လာပြီဆိုတော့ကမ္ဘာ့မီဒီယာရဲ့အားနဲ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့သမ္မတတွေ၊နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ အကြီးအကဲတွေအားလုံးကျနော့်အကြောင်းကိုသူတို့ကြည့်မယ်လေ။ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်ပြောချင်တာကို ပြောလို့ရပြီလေ”
ဒီမြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့၁၉၈၈ကတည်းကစပြီးတော့ကျူုးလွန်လာခဲ့တဲ့အမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့CoIလုပ်နေကြတာ ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ့။ အကို့အနေနဲ့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိလား ခင်ဗျာ့။
“ကျနော် တယောက်ထဲ လုပ်တာကို။ ဘယ်သူမှ မတိုင်ပင်ပါဘူး”
“နိုင်ငံတိုင်းမှာကကျောင်းသားအတော်များများအတွေးအခေါ်တွေ နောက်ဆုတ် ကုန်ကြတယ်။ စစ်အစိုးရကို
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အော်လာတယ်။ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး၊သံရုံးတွေမှာသွားအော်ဆန္ဒတွေပြ အခမ်းအနားတွေ လုပ်။ အချိန်တွေကုန်။ အလုပ်တွေပျက်၊ ငွေတွေကုန်ပြီးတော့ မီဒီယာမှာမပါ ဘာမှမပါ။ ဆုံးရှုံးမှုတွေဒီမှာတွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုတိုက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကျနော်က ပြချင်တာ။ လက်နက်ကိုင်တာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီပြင်နည်းနဲ့တိုက်လို့ရတယ်။မီဒီယာရဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ့။ မီဒီယာဆိုတာကလဲ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် အလုပ်လုပ်ကြတာ။ ခင်ဗျားက ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်ပြရင် မီဒီယာက ခင်ဗျားဆီ ရောက်လာမှာပဲ”
“ကျနော်ကသူတို့အဖွဲ့ကိုတောင်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ကျနော်ကတယောက်ထဲအမြဲပြေးနေတာ။ကျနော့် ဟာတွေကိုတချို့က လိုက်မမီဘူးဗျ။ ကျနော်က ဒီမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေကို တန်းတူပြောနိုင်တဲ့ အဆင့်ရှိတယ်။ ဗမာတွေနဲ့ ပြောရတဲ့အချိန်မှာ အရမ်း အဟောင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဗျူရိုကရက်တွေ များတယ်ဗျာ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေ။ ကျနော်တို့မှာ အချိန် အဲလောက်မရှိတော့ဘူးဗျ”
“ဒါကပြောလို့မရဘူး။ဇာတ်လမ်းပြီးမှကြည့်ဆိုတာအဲဒါပဲ။ကျနော့်ရဲ့ဦးတည်ချက်ကICCရောက်ရင်အောင်မြင် တယ်ပေါ့။ ဒီကြားထဲမှာကျနော့်ကိုနားမလည်တဲ့လူတွေကပြဿနာရှာတယ်။ဗမာအဖွဲ့အစည်းတွေက ဖုန်းတွေဆက်တယ်။နောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းသားလွှတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့ဘာတို့က ကန့်ကွက်တယ်။ သူတို့က ကျနော့်ကို မယုံဘူး။ အရေးယူဖို့ အစိုးရက မယုံဘူး။ ဒီလူဟာ အပြစ်ရှိခဲ့တဲ့လူတ ယောက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် ငါတို့ကို လာလိမ်နေတာလားမသိဘူး။ နောက်တချက်ကလဲ အရမ်းအကြီးကြီးတွေ လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တာကိုး။ ကျနော့် မှာက အမကိုလည်း ထောင်ချတယ်။ အမေကိုလည်း ထောင်ချတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းထောင်ကျခဲ့တယ်။ ပေးဆပ်ခဲ့တာလည်း ရှိတယ်။ သိပ်ပြောလို့ မကောင်းဘူးနော်။ အဲဒါလောက်ကို မြင်စေချင်တယ်။ ကျနော့်ပန်းတိုင်လေးကိုsupportလုပ်ပေးပါ။ အဲဒီကိုရောက်သွားရင် အကောင်ကြီးတွေနဲ့ စကားပြောတော့မယ်။ ဗမာပြည်ကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ပြီးတော့ ဘာမှ အက်ရှင် မပါပဲနဲ့ အချိန်တွေဖြုန်းနေတာ”
CoIကိစ္စလုပ်နေသူတချို့ကကိုထူးထူးဟန်အခုလိုလုပ်လိုက်ခြင်းဟာသူတို့လုပ်ငန်းတွေကို အနှောက် အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ထင်မြင်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒါကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းချင်ပါသလဲ။
“ကျနော်ကသူတို့အဖွဲ့ကိုတောင်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ကျနော်ကတယောက်ထဲအမြဲပြေးနေတာ။ကျနော့်ဟာတွေ ကိုတချို့ကလိုက်မမီဘူးဗျ။ကျနော်ကဒီမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ခေါင်းဆောင်တွေကို တန်းတူပြောနိုင်တဲ့ အဆင့်ရှိတယ်။ ဗမာတွေနဲ့ ပြောရတဲ့အချိန်မှာ အရမ်း အဟောင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဗျူရိုကရက်တွေ များတယ်ဗျာ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေ။ ကျနော်တို့မှာ အချိန် အဲလောက်မရှိတော့ဘူးဗျ”
“ကျနော်က ပန်းချီဆရာပါ။ ဆုတွေရတယ်။ မနှစ်က တသောင်းဆု ရတယ်လေ”
“ရောင်းရတဲ့ပန်းချီတော့မဟုတ်ဘူး။ကျနော့်ပန်းချီကားတွေကဈေးအရမ်းကြီးတယ်။တော်ရုံတန်ရုံလူ မဝယ်နိုင်ဘူး။ ကျနော့်ဟာ ကျနော် ဆွဲတယ်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် လုပ်တယ်။
“ဆုတွေကတော့ရတယ်ဗျာ။ကျနော့်နံရံမှာဆုတွေကတော့ ပြည့်နေတာပဲ။ ၁၅ဝဝ၊ ၆ဝဝဝ၊ ၁ဝဝဝဝ အဲလိုမျိုး ရထားတာ”
“ရောက်ခါစကတော့စာမတတ်တော့ဂရေးဟွန်းမှာအလုပ် ဝင်လုပ်တယ်။ စာတတ်တော့ ပန်းချီဆွဲတယ်ပေါ့။ အလုပ်တွေ တော်တော်များများ လုပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်။KevinRuddဗမာပြည်သွားဖို့လည်း ကျနော် လုပ်ပေးလိုက်တာပဲ။ ကျနော်ဒီမှာ လော်ဘီလုပ်ထားတာ အများကြီးပဲ။ သတင်းစာတွေထဲမှာ ဗမာပြည်မသွားရင် မင်းငါ့ကို လိမ်တာပဲဆိုတဲ့အထိ ကျနော်က ပြောထားတယ်။ အတိုက်အခံဖြစ်နေတုန်းက မင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့တုန်းက မင်းငါ့ကို ဗမာပြည်သွားမယ်ဆိုပြီး ကတိပေးခဲ့တယ်။ မင်း ဝန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ မသွားဘူးလို့ သတင်းစာမှာ ထုတ်တော့ သိပ်မကြာဘူး။ သူ သွားရတယ်။ တချို့တွေက မသိဘူး။ ကျနော်က အစိုးရက လူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် လုပ်နေတာ။ ခုကိစ္စလည်း လူတော်တော်များများက လိုက်မီမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော် တောင်းပန်တယ်။ ပွဲပြီးတဲ့အထိ ကြည့်ပါ။ ခုတော့ လူယုတ်မာ၊ သစ္စာဖောက်ပေါ့။ လူသတ်သမားပေါ့”
“အခု ပြဿနာ အဲဒါ တက်သွားတာပေါ့။ ကြားထဲက နားမလည်တဲ့အဖွဲ့တွေက ကျနော့်ကို ကန့်ကွက်တယ်။ အဲတော့ အစိုးရက မဖမ်းရဲဘူးပေါ့။ ဖမ်းလို့ ICC ရောက်သွားရင် ကျနော် အောင်မြင်ပြီ”
“ရှိတယ်ဆိုရင်ကျနော် အရမ်းစကားပြောချင်တယ်။ ဖြတ်လမ်းက ကျနော်က တက်တဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြီးနဲ့ တက်တယ်ဆိုတော့ မရဘူး။ ဒုက္ခသည်တယောက်ကို ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ စကားမပြောဘူး။ သူတို့ကို တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင် ဖြတ်လမ်းက တက်ဖို့လိုတယ်”
“မမေးနဲ့တော့ဗျာ။အဲလောက်ဆိုခင်ဗျားသဘောပေါက်ပြီ။အားလုံးကကျောင်းသားတွေပါပဲ။ကျနော်အလုပ် လုပ်နေတယ်။ကျနော့်ပန်းတိုင်ကိုသွားမယ်။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်၊လူသတ်ခဲ့တယ်ဘာညာ ဆိုတာကလည်း ကျနော့်ရဲ့စတိုရီပေါ့။ဒါပေမယ့်စတိုရီဆိုတာကစတိုရီပဲဖြစ်တယ်။ထရူးစတိုရီကသပ်သပ်။စတိုရီက သပ်သပ်”
“မမေးနဲ့တော့ဗျာ။အဲလောက်ဆိုခင်ဗျားသဘောပေါက်ပြီ။အားလုံးကကျောင်းသားတွေပါပဲ။ကျနော် အလုပ်လုပ်နေတယ်။ကျနော့်ပန်းတိုင်ကိုသွားမယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်၊လူသတ်ခဲ့တယ်ဘာညာ ဆိုတာကလည်းကျနော့်ရဲ့စတိုရီပေါ့။ ဒါပေမယ့် စတိုရီဆိုတာက စတိုရီပဲဖြစ်တယ်။ ထရူးစတိုရီက သပ်သပ်။ စတိုရီက သပ်သပ်”
“ကျနော်ကထောင်တွေထဲမှာရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်၊ အရိုက်ခံထားရတာကိုး။ သာယာဝတီထောင်ထဲမှာ ကျနော် မရောက်ဖူးတဲ့တိုက်ခန်း မရှိဘူး။ သြစတြေးလျရောက်မှ စိတ်ကျရောဂါရတယ်။ အပြင်းအထန်တော့ မဟုတ်ဘူး။တခါတလေအိပ်ဆေးလေးဘာလေး သောက်တယ်။ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးမှု Counselling တွေသွားတွေ့တယ်။ကျနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှတ်သညာmemoryတွေရှိခဲ့တာကိုး။ ကျနော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လိုင်းတွေက အရမ်းမြင့်မားတော့ ဒီအမှတ်သညာတွေကို ပျောက်သွားစေချင်တယ်”
“ခုထက်ထိပေါ့။ဒါပေမယ့်အခုကmentallyfitဖြစ်နေပြီလေ။ ဒါကြောင့် ဒါတွေ လုပ်နိုင်တာပေါ့။ ဦးနှောက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကောင်းလို့ ပန်းချီတွေ ဆွဲတယ်၊ ဆုတွေ ရတယ်။ အရူးတယောက်ကို ဆုမပေးဘူးဗျ။ အရူးတော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ စိတ်ကျရောဂါတော့ ရှိတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်။ ဒီနိုင်ငံက ပရီမီယာတွေတောင် ရှိတာ။ သူတို့ ထုတ်ပြောတယ်လေ။ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ ရူးတာနဲ့ မတူဘူးဗျ။ ရူးတာက လုံးဝရူးသွားတာ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဟောင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ ကျနော့်တိုင်းပြည်အတွက် အရမ်းစိုးရိမ်တယ်”
“သူတို့ဖမ်းတာကို စောင့်နေတယ်။ ခုထက်ထိ လာမဖမ်းသေးဘူး။ ဖမ်းရင် ဥပဒေပညာရှင်နဲ့ သွားမယ်။ ICC ပို့ချင်လည်းပို့။ ဥပဒေမရှိဘူးဆိုရင်လည်း သူတို့သဘောပဲလေ။ မီဒီယာက ပြဿနာရှာမှာပေါ့။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီလောက် လူတွေသတ်လာတဲ့ သူတယောက်ကို လက်ခံထားလားဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့ မီဒီယာမှာ အကုန်လုံးပါသွားပြီ။ ပွဲပြီးတဲ့အထိ ကြည့်ပါလို့ အားလုံးကို ကျနော်ပြောပရစေ”
Posted by justfreeman at 12:12